Shirka Kismaayo: Guul Emaaraat miyaa! mise guul Soomaaliyeed - Caasimada Online
Home Maqaalo Shirka Kismaayo: Guul Emaaraat miyaa! mise guul Soomaaliyeed
Shirka Kismaayo: Guul Emaaraat miyaa! mise guul Soomaaliyeed
Waxaan xasuustay sheeko na dhex-martay nin reer Waqooyi ah oo yiri ” Run isuma sheegtaan” (Siyaasiyiinta Reer Koofur run isuma sheegaan, dadkoodana run uma sheegaan, ajnabigana run uma sheegaan, lkn Reer Waqooyigu runta ayey isu sheegaan). Tusaale; Xizbul-xaakimka Somaliland ayaa damcay in uu ka takhaluso Gudoomiyihii Barlamaanka Cirro oo Mucaarad ku noqday, waxey hoos ka amreen Gudoomiye ku xigeenkii Baashe, shir ayuu qabtay, Cod Aqlabiyad ah ayuuna ku riday, lkn Guurtida ayaa soo fara-gelisay runtana u sheegtay (Waryee Baashe ma ogid mana joogin waxa laga soo maray Somaliland! kuraastana Qabiil ayaa lagu qeybsaday ee Cod iyo Axzaab laguma qeybsan ee xadkaaga ha ka bixin) markii ay tageen Prof. Samatar iyo Galeyr runta ayaa loo sheegay! Biixi iyo Cirro kala raaca ama Koofur isaga laabta!.
Ajandaha Shirkaas wuxuu ahaa; in la rido Madaxweyne Xasan, lana dhiso Madaxweyne Cumar, Xildhibaanadana laga reebo Wadaado iyo Wadaniyiin, Qaraabna la qaato, markii la maqlay heshiiskaas waxaa kacay dadweyne ka gadooday fara-gelinta Emaraat, ilaa Safiirkii uu baqay oo uu tegay Nairobi. Asbuuc kadib M. Xasan ayaa tegay Safaarada Emaraat ee Muqdisho, wuxuuna sheegay (Emaraat waa is jecelnahay, xiriirkeynana meeshii ugu fiicneed ayuu marayaa) waa la yaabay! Waxaan wareystay in uu ii fasiro nin ka mid ahaa gacanyara-yaashii M. Xasan, wuxuu igu yiri (Carabtaas waxba ma ogee Xasan iyo Madaxda tagtay Abu-dhabai waa iska warqabaan, Qaraabkuna waa ka dhaxeeyaa! Dadkii hala reebo la yirina Qabiilkooda ayaa wata! Qaraabkiina kaalmo ayaa laga siiyey si cod looga helo) waxaan fahmay in aan run la isu sheegin!.
Prof. Maxamed Nuur Gacal